Fikarakarana ny fahasalamana Mila manatona mpitsabo in-droa isan-taona
In-droa isan-taona ny olona iray no tokony hijery ny toe-pahasalamany eny anivon’ny tobim-pitsaboana na dia salama tsy marofy aza. Betsaka anefa ireo tsy manana fahafahana ny hanao izany noho ny hasarotan’ny fiainana,
antony manosika ny “Espace médicale Saint Michel Andravoahangy” hanatanteraka fitsaboana maimaimpoana ho an’ny daholobe. Manomboka amin’ny alatsinainy ho avy izao izy io, haharitra dimy andro ao anatin’ilay hetsika “Tsy mandrimandry manana aretina”. Hojerena maimaimpoana avokoa ireo karazan’aretina mpahazo ny olon-drehetra, manomboka any amin’ny zazakely ka hatrany amin’ny reny mitondra vohoka sy ny zokiolona, hoy ny dokotera Rakotondratrema Hary, médecin chef ao an-toerana. Olona manodidina ny 50 isan’andro no andrasan’ity tobim-pitsaboana iray ity ankoatra ireo marariny efa mahazatra. Mivoha manomboka ny alatsinainy ka hatramin’ny alahady ny toby. Mandray marary amin’ny alina ihany koa sady afaka mandray an-tanana ireo marary tsy maintsy miditra hopitaly. Efa manana fitaovana hijerena maso ihany koa izy ireo ankehitriny, ankoatra ny ECG sy ny fanaovana échographie.